SOLONTENAN’NY CNIDH EO ANIVON’NY HCDDED : Tadiavin’ny prezidansa lavina ny fahalanian’Imbiky Anaclet | NewsMada
SOLONTENAN’NY CNIDH EO ANIVON’NY HCDDED : Tadiavin’ny prezidansa lavina ny fahalanian’Imbiky Anaclet
Par Freenews sur 20/03/2017
Miteraka resa-be eo anivon’ny tontolo politika amin’izao fotoana izao ny fametrahana ilay rafitra HCDDED, izay rafitra voalazan’ny lalam-panorenana ao amin’ny andininy faha-43 momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna, ny fangaraharan’ny fitantanana ary ny fiarovana ny zon’olombelona.
Araka ny loharanom-baovao voaray teo anivon’ny filan-kevi-panjakana etsy Anosy, mandalo any amin’ny praiminisitra amin’izao fotoana izao ity rafi-pitsarana ambony ity, araka ny baikon’ny sekretera jeneralin’ny fiadidiana ny repoblika angatahina ny heviny mikasika ny tsy fanekena indray ny fahalanian’Imbiky Anaclet, tamin’ny 27 janoary 2017 lasa teo, izay natolotry ny vaomiera mahaleotena misahana ny zon’olombelona (CNIDH) ho isan’ny mpikambana ao anatin’ny filan-kevitra ambony misahana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED). Ity kandida natolotry ny MAMIMAD, izay misehatra eo amin’ny fiarovana ny zon’olombelona ity dia lanin’ny be sy ny maro tamin’ny isam-bato 8 tamin’ireo mpifidy miisa 9. Vato tokana no azon-dRamamonjisoa Huguette, vadin’i Idealison, izay tale misahana ireo raharaham-pitsarana eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika raha toa ka tsy nahazo vato kosa ireo kandida telo hafa. Raha ny voalazan’ny andininy faha-5 ao amin’ny lalàna 2015-001 tamin’ny 12 febroary 2015 izay nametraka ny HCDDED, raha vao mahazo ny tatitra mikasika ny fifidianana, ny fiadidiana ny repoblika no mamoaka « didy hitsivolana mikasika io fifidianana io », toy ny amin’ireo tranga hafa izay ambaran’ny lalàm-panorenana na lalàna hafa.
Araka ny loharanom-baovao voaray, nandefa olona ny teo anivon’ny fiadidiana ny repoblika, mpiasa eo anivon’ny fitantanana ny raharaham-pitsarana eo anivon’ny prezidansa io olona io, mba hisava ny antotan-taratasy rehetra mikasika ny fifidianana teo anivon’ny CNIDH mba hijerena ny fomba ahafahana mitsipaka io fahalanian’Imbiky Anaclet io. Tsy tanteraka anefa izany fikasana izany satria voahaja tamin’ny antsipirihiny avokoa ny lalàna rehetra nahalaniany.
Farany, mba tsy hizakan’izy ireo ny vokatry ny fandavana ny fahalanian’Imbiky Anaclet, sy ny mba tsy hanasoketana azy ireo amin’ny fikitihany ny zanaky ny faritra izay mipetraka eo amin’ny toerana manana ny maha-izy azy, natsipin’ny fiadidiana ny repoblika, ny mpiasan’andriamatoa Idealison, ho any amin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, izay avy any amin’ny faritra mitovy aminy ihany koa, ny baolina mba hanenjehana azy.
Tohan-kevitra entin’ny fiadidiana ny repoblika manala an’Imbiky Anaclet ao anatin’ity filan-kevi-panjakana ity dia ny hoe izy dia efa mpikambana eo anivon’ny CNIDH, ary tokony tsy ho azo raisina ny filatsahany, satria raha ny voasoratra ao anatin’ny taratasy filan-kevitra nalefan’izy ireo dia misy hoe « raha toa ka samy nilatsaka ho fidiana avokoa ireo mpikambana rehetra tao amin’io rafitra io dia iza no mpifidy ? ».
Rehefa nanontany mpahay lalàna izahay dia nambarany fa fitaka ranoray no ambaran’io antony io, ary tsy misy mitombina na kely aza. Ireo fikambanana rehetra tsy miankina amin’ny fanjakana, ny holafitry ny mpanao gazety, ny holafitry ny mpitsara, ny fitsarana ambony, ireo fikambanana misehatra amin’ny fiarovana ny zon’olombelona toy ny CNIDH, dia mifidy iray amin’ireo mpikambana aminy, satria ny lalàna dia mamaritra fa ny mpikambana rehetra dia afaka milatsaka ho fidiana na ireo tsy mpikambana ihany koa aza. Tsy misy fotony araka izany ny fangatahan’io taratasy filan-kevitra io. Etsy ankilan’izay anefa, mampanontany tena ihany ny mikasika ny hoe : iza marina no mpifidy raha toa ka nilatsaka ho fidiana avokoa ireo mpiakambana rehetra teo anivon’ny CNIDH ? Azo antoka fa izy ireo ihany no mpifidy, ireo mpikambana rehetra, satria ny lalàna dia tsy mametraka fa tsy mahazo mifidy izay kandida. Raha ny momba ny fifidianana teo anivon’ny CNIDH, tsy nanatrika ny fifidianana i Imbiky Anaclet, tsy ny lalàna no mamaritra izay fa safidiny manokana, hoy ihany ny nambaran’ny olona nanontanianay.
Mampanontany tena araka izany ny hoe fa maninona no hanaovana antsojay tahaka izao i Imbiky Anaclet, kandida teo anivon’ny CNIDH izay tsy nanatrika ny fifidianana akory, tsy tahaka ireo kandida hafa avy amin’ireo fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana, izay nanatrika ny fivoriam-be sy nandray anjara tamin’ny fandatsaham-bato ?
Mba ahazahoana ny maro an’isa eo anivon’ny HCDDED
Matoa olona iray izay nolanian’ny CNIDH no enjehin’ny eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika sy ny praiminisitra dia azo antoka fa lehibe ny tombon-tsoa ao ambadika. Mila mahazo toky ny eo anivon’ny fitondrana fa ny maro an’isa amin’ireo mpikambana eo anivon’ny HCDDED, izany hoe ny 5 amin’ny 9, dia an’ny fiadidiana ny repoblika. Manoloana izany, ataon’izy ireo izay hanoloana an’Imbiky Anaclet, izay mahaleo-tena sy tsy mety amin’izy ireo loatra, an-dramatoa vadin’i Idealison, izay tsy nahazo afa-tsy vato tokana. Azo antoka tsara amin’izay ny ahazahoan’ny fitondrana ireo vato dimy tadiaviny eo anivon’ny HCDDED : an-dRamamonjisoa Huguette, avy amin’ny CNIDH, Le Noble (avy amin’ny primatiora) izay avy amin’ny antenimieran-doholona, Rabetafika Fulgence (mpikamban’ny HVM) izay nolanian’ny antenimieram-pirenena, Tsiazonangoly Annick Irenée (vadin’ny minisitra HVM PTT Rakotomamonjy Nepatraiky) izay nofidian’ny HCC ary izay olona atolotry ny fiadidiana ny repoblika.
Mampanahy araka izany fa tsy maintsy hisy fanitsakitsahan-dalàna ataon’ny fitondrana mba ahafahan’izy ireo mifehy ny HCDDED, toy ny miseho eo anivon’ny HCC sy ny CENI amin’izao.
Ny fahaleovantenan’ny filan-kevi-panjakana
Tiana hipetraka ve ny HCDDED izay miady ho an’ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna nefa izao sahady dia efa hitsahina ny lalàna sy ny fifidianana izay nataon’ny maro an’isa teo anivon’ny CNIDH mialohan’ny hametrahana io filan-kevitra ambony io ?
Na inona na inona anefa zava-mitranga, antenaina fa tsy hanaiky ny tsindry isan-karazany ataon’i Idealison ny filan-kevi-panjakana, na dia nivoaka avy tamin’ny taranaka mpitsara taloha aza iry voalohany. Antenaina ihany koa fa tsy hanaiky ny tsindry rehetra ataon’ny fahefana mpanatanteraka ity rafitra ity mba tsy ahafahana mandany an’Imbiky Anaclet fa hanome toerana ny vadin’ny tale misahana ny raharaham-pitsarana eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika. Ireo mpitsara rehetra dia mahafantatra fa ny filohan’ny filan-kevi-panjakana dia olona akaiky tokoa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, inoana fa na izy na ireo mpitsara ambony eo anivon’ny filan-kevi-panjakana dia tsy ho latsaka amin’ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena ahaleo-tena tokoa.